राहुलले दिए कांग्रेस अध्यक्षबाट राजीनामा – erupse.com
सीमा विवादमा सांसदबीच नै चर्काचर्की | उच्च लेकाली क्षेत्रमा हिमपात | नेबिसंघ म्याग्दीको १२ औ अधिबेशन,सभापतिमा निर्मल खत्री | महिला हिंसाविरुद्ध पुरुष सहभागिता: नीतिमा छलाङ व्यवहारमा अझै ल्याङल्याङ | १३ औं सागमा शुक्रबार हुने खेलहरू | नेपालले जितेका ३७ स्वर्ण मध्ये महिलाको नाममा २१ स्वर्ण | रुप्से दैनिक ! १९ म‌ंसिर २०७६ | १३औँ साग : उसुमा नीमालाई स्वर्ण | सागमा स्वर्ण जित्नेहरु | रुप्से दैनिक ! १८ म‌ंसिर २०७६ |
राहुलले दिए कांग्रेस अध्यक्षबाट राजीनामा
राहुल गान्धीले बुधबार कांग्रेस अध्यक्षको पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेका छन् ।
राहुलले राजीनामाको घोषणा गर्दै भर्खरै सम्पन्न लोकसभा चुनावको हारको जिम्मा पनि आफैले नै लिएका छन् । कांग्रेस पार्टीलाई फेरि उठाउनका लागि कडा फैसलाको जरुरी पर्ने बताउँदै राहुलले नयाँ नेतृत्वले पार्टीको साहस, प्रेम र इमानदारीलाई अझ बढाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
राजीनामा दिएलगत्तै राहुलले नयाँ अध्यक्ष छान्ने जिम्मा एउटा समूहलाई दिइनुपर्ने बताएका छन् । त्यही समूहले नयाँ अध्यक्षको चयन गर्ने उनले भनेका छन् ।
पढ्नुहोस् राहुल गान्धीको त्यो पत्र –
3:52 PM – Jul 3, 2019
कांग्रेसको लागि काम गर्न पाउनु मेरो लागि सम्मानको कुरा हो, जसको आदर्श हाम्रो देशको लागि जीवनशक्ति हो । ममाथि पार्टी र देशले दिएको मायाको ऋण छ र म यसको एक अंश हुँ ।
कांग्रेसको प्रमुख भएको नाताले २०१९ को लोकसभा चुनावमा हारको जिम्मेवारी मेरो हो । भविष्यमा पार्टीको विस्तारको लागि जवाफदेहिता निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । यही कारणले नै मैले कांग्रेस पार्टीको अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएको हुँ ।
कांग्रेस पार्टीका कैयौँ सहयोगीले मलाई अध्यक्षका लागि चुनाव गराउन भनेका छन् । पार्टीको नयाँ अध्यक्ष मैले चयन गर्नु मेरा लागि पनि ठिक हुँदैन । हाम्रो पार्टीको विशाल इतिहास तथा विरासत रहेको छ । म यसको संघर्ष र मर्यादाको आदर गर्छु । कांग्रेस पार्टी हाम्रो देशको निर्माणसँगै बनेको हो ।
मलाई भरोसा छ कि पार्टीले नयाँ नेतृत्वको बारेमा सही निर्णय लिनेछ । नयाँ नेतृत्वले पार्टीलाई साहस, प्रेम तथा इमानदारीपूर्वक अगाडि बढाउनेछन् भन्नेमा म ढुक्क छु ।
राजीनामा दिएसँगै मैले कांग्रेस वर्किङ कमिटीमा नयाँ अध्यक्ष चयनको जिम्मेवारी एउटा समूहलाई दिऊँ भन्ने सल्लाह दिन्छु । त्यही समूहले नयाँ अध्यक्ष चयन गर्नेछ । यस विषयमा मैले पूर्ण सहयोग गर्नेछु । यसरी कांग्रेसको नेतृत्व सहजै परिर्वतन हुनेछ ।
मेरो संघर्ष केवल सत्ता प्राप्तिका लागि होइन । बीजेपीविरुद्ध मेरो मनमा कुनै घृणा छैन । तर भारतका बारेमा बीजेपीको विचारको मेरो रौँ रौँले विरोध गर्दछ ।
मैले विरोध गर्छु किनकी मेरो अस्तित्व एक यस्तो भारतीय विचारबाट ओतप्रोत छ जो उनीहरुको भारतप्रतिको विचारसँग मेल खाँदैन । यो कुनै नयाँ लडाइँ होइन । हाम्रो धरतीमा हजारौँ वर्षदेखि लडिँदै आएको लडाइँ हो । जहाँ उनीहरु पृथकतावाद देख्छन्, त्यहाँ म समानता देख्छु । जहाँ उनीहरु घृणा देख्छन् त्यहाँ म प्रेम देख्छु । जुन चिजदेखि उनीहरु डराउँछन्, त्यो चिज म अपनाउँछु ।
यस्तै सहानूभूतिवाला विचार लाखौँलाख मेरा प्यारा देशवासीको मनमा पनि रहेको छ । यही हो भारतको त्यो विचार जसलाई हामीले आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म रक्षा गर्नेछौँ ।
हाम्रो देश र हाम्रो संविधानमाथि आक्रमण भैरहेको छ । उनीहरु हाम्रो राष्ट्रको संरचना नष्ट गर्ने डिजाइनमा काम गरिरहेका छन् ।
यो लडाइँबाट म कुनै पनि प्रकारले पछि हटेको छैन । म कांग्रेस पार्टीको एक इमानदार सिपाही तथा भारतको समर्पित छोरा हुँ । म आफ्नो अन्तिम सास रहेसम्म यसको सेवा र रक्षा गर्नेछु ।
हामीले एउटा तीतो र प्रतिष्ठित चुनाव लड्यौँ । हाम्रो चुनाव प्रचार भारतका सबै नागरिक। धर्म र सम्प्रदायका लागि भाइचारा, सहिष्णुता तथा सम्मानवाला थियो ।
मैले आफ्नो दमले भ्याएसम्म व्यक्तिगत रुपमा प्रधानमन्त्री, आरएसएस तथा ती संस्थासँग लडिरहेँ जुन उनीहरुले कब्जा गरेका छन् । म लडेँ किनकी म भारतलाई माया गर्छु । जुन आधारमा भारत खडा भएको छ त्यसलाई बचाइराख्न पनि म लडेँ ।
एक समय पूर्णरुपमा म एक्लै पनि लडेँ । त्यसमा पनि मलाई गर्व छ । मैले पार्टीका कार्यकर्ता, सदस्य, पुरुष तथा महिलाको साहस तथा समर्पणबाट धेरै कुरा सिकेँ । उनीहरुले मलाई माया गरे र विनम्रता सिकाए ।
चुनाव पूर्ण रुपमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन देशका सबै संस्था निष्पक्ष रहनु अनिवार्य छ । स्वतन्त्र प्रेस, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा एक पारदर्शी चुनाव आयोगबिना कुनै पनि चुनाव निष्पक्ष हुन सक्दैन । सबै वित्तीय संसाधन एउटै पार्टीको कब्जामा भएको अवस्थामा स्वतन्त्र चुनावको परिकल्पना गर्न सकिँदैन ।
हामीले सन् २०१९ मा केवल एउटा राजनीतिक पार्टीसँग मात्रै लडेनौँ, हामीने भारतका सरकारको पूरै संयन्त्रविरुद्ध चुनाव लड्नुपर्‍याे । हरेक संस्थालाई विपक्षीविरुद्ध खडा गरियो । यो कुरा प्रष्ट छ कि भारतीय संस्थाको जुन निष्पक्षताको हामीले प्रशंसा गर्थ्यौँ त्यो निष्पक्षता अब रहेको छैन ।
देशका सबै संस्थामाथि कब्जा गर्ने आरएसएसको अभिष्ट अब पूरा भएको छ । हाम्रो लोकतन्त्र मौलिक रुपमा निकै कमजोर भएको छ । भारतको भविष्य निर्धारित गर्ने चुनाव अब केवल औपचारिकतामा मात्रै सीमित भएको छ ।
सत्तामा रहिरहनका लागि भारतले अब अकल्पनीय हिंसा र पीडा सहनु परेको छ । किसान, बेरोजगार, युवा, महिला, आदिवासी, दलित तथा अल्पसंख्यक समुदायले सबैभन्दा बढी पीडा सहनुपर्‍याे ।
हाम्रो देशको अर्थव्यवस्था तथा साखमाथि पनि यसले ठूलो असर पुर्‍यायो ।
प्रधानमन्त्रीको यो जितको अर्थ यो होइन कि उहाँ भ्रष्टाचारको आरोपबाट मुक्त हुनुभयो । कसैले जति नै सुकै पैसा खर्च गरोस वा प्रोपोगाण्डा फैलाओस्, सत्यलाई लुकाउन सक्नेछैन । भारतका संस्थाहरुलाई पुनः प्राप्त गर्न र ती संस्थालाई पुनर्जीवित गर्न फेरि एकपटक पूरा भारत एक हुनु आवश्यक छ । ती संस्थालाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन कांग्रेसले संघर्ष गर्नेछ ।
बुधबार, असार १८, २०७६ मा प्रकाशित
‘नो ब्रा’ अभियान चलाएकी कोरियाली पप गायिका मृत फेला
प्रवासी नेपाली एकता मञ्च ओमन द्वारा आयोजित बृहत साँस्कृतिक कार्यक्रम भब्यताको साथ सम्पन्न
म्याग्दी प्रवासी नेपाली संघ (मोना) कुवेतद्वारा ८ जना पीडितहरुलाई आर्थिक सहयोग
सीमा विवादमा सांसदबीच नै चर्काचर्की
शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा सीमा समस्याबारे छलफल हुँदै थियो । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट..
सीमा विवादमा सांसदबीच नै चर्काचर्की December 13, 2019
उच्च लेकाली क्षेत्रमा हिमपात December 13, 2019
नेबिसंघ म्याग्दीको १२ औ अधिबेशन,सभापतिमा निर्मल खत्री December 12, 2019